Umbono wesatellite wesikhathi simahla kwi-Intanethi. Ndingabona phi? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungakhangela kwiikhamera zesitishi samanye amazwe kwiwebhusayithi: http://space.utema.ru/earth-online/, kukho iimpendulo kwimibuzo enxulumene nosasazo. Kumele kukhunjulwe ukuba usasazo ngamanye amaxesha luyaphazamiseka ngenxa yokuba isitishi sishiya indawo yonxibelelwano.
Ngaphambili, umntu wayenokuthi aphuphe into enjalo. Ngoku wonke umntu, ukuba banokufikelela kwiWebhu eBanzi yeHlabathi, baya kuba nakho ukubona Ixesha lemephu yehlabathi, kwaye konke oku ngokuqinisekileyo khulula.
Akukho sidingo sokuya naphi na. Ungaya kule ndawo okanye kule ndawo kwaye yiyo. UGoogle unika eli nqaku.
Bukela kwaye ukonwabele ubuhle behlabathi.
Ukujongwa kwesatellite ngexesha lokwenyani akuyongxaki. KwiWebhu eBanzi yeHlabathi, unokuzifumana ngokulula iisayithi ezonwabileyo ukukubonisa umtsalane kunye nobuhle beplanethi yethu. umbono othandekayo. Ndiyithande kakhulu le ndawo, ndikucebisa ukuba ujonge.
Kwi-Intanethi kunokujongwa kule ndawo, umzekelo. Njengoko kubhaliwe, kukho usasazo olubukhoma oluvela kwi-ISS.
Kodwa apha andiboni. Kungenzeka ukuba i-ISS ibisemthunzini (ithi emva koko kuboniswe isikrini esimnyama).
Kukwakhona nenkqubo yamehlo eMhlabeni ukuba ibonwe kwisatellite izinto ezahlukeneyo ezikwi-space (hayi uMhlaba kuphela).
Okona kusebenza kunye nokusebenza kakhulu, kunye nemizobo elungileyo ebonisa ikhamera inokubonwa apha. Apho unokuhlala ubone usasazo oluhle kakhulu, olukumgangatho ophezulu kwaye ngaphandle kokukhanya okuvela kwilanga nakwilanga. Kananjalo, abasebenzisi bathumela iifoto zabo kusasazo-ngamanye amaxesha zinomdla kakhulu. Ungafumanisa indlela ye-ISS ngaphezulu kwesixeko sakho kunye nelizwe apho kwaye ubone ngexesha langempela ngokwakho kwisithuba.
Inyani yile yokuba uMhlaba uthathwe kwii-satellites iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezi-7 ngeveki. Emva kwayo yonke loo nto, ilanga lihlala likhanya kwelinye icala lehlabathi, ungabukela usasazo olwenziweyo kwiwebhusayithi http://sibirica.su/potaynaya-dver/zemlya-iz-kosmosa-pryamaya-translyatsiya-s-mkshy;s
Ukusasazwa kwevidiyo yexesha langempela ukusuka kwisatellite kunokujongwa kwiindawo ezininzi. Okulandelayo, ndiza kudwelisa ezinye zazo:
Zininzi iindawo zokujonga iimephu kwi-intanethi. Ungayibona apha, apha naphaya. Into ephambili kukuba kukhululekile ngokupheleleyo. Imbono iyathutha, ndifuna ukuphinda ndiyihlolisise. Into ephambili kukuba isatellite ikwindawo eyimfuneko yokujonga.
Kunomdla kakhulu ukubukela intshukumo kunye nophuhliso lomhlaba wethu, iilwandle kunye nemilambo, amafu, iimvula kunye neendudumo, ukutshintsha kwemozulu kunye nemo yendalo, sonke sixhomekeke kuyo, obu bubomi boluntu. Ungabona ikhonkco kwi-intanethi.
Ayisiyiyo kuphela imibhobho eyahlukeneyo enobundlobongela kunye neespeyipiya ezihambahamba kumjikelo kamama woMhlaba, kodwa nakwisiKhululo soMhlaba seNdawo, esi, ukongeza kuzo zonke ezinye izixhobo, sinekhamera yewebhu esasaza umbono we-intanethi weplanethi ukusuka esibhakabhakeni. Ukubona uMhlaba ukusuka kule angle, yiya kule ndawo. Kuyinyani, ukuba isikhululo sikwicala elimnyama, ke awuyi kubona nto. Ukongeza, akusoloko kukho unxibelelwano, ke yiba nomonde.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,163.